I-steroid enamandla kunazo zonke iMibolerone (Hlola amaconsi) kwi-intanethi | AASraw
I-steroid enamandla kunazo zonke iMibolerone (Hlola amaconsi) kwi-intanethi
/Blog/Ithala/I-steroid enamandla kunazo zonke iMibolerone (Hlola amaconsi) kwi-intanethi
ezaposwa ngomhla 07 / 19 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Yonke into ngeMibolerone (Hlola amaconsi)
1.Yintoni i-Mibolerone (Hlola amaconsi)?
2.Mibolerone Ukuqulunqa i-Pharmacy
Ukusetyenziswa komzimba we3.Mibolerone
4.Mibolerone (Hlola i-Drops) iziphumo
5. Ubomi bemizuzu yeMibolerone
7. Imitha yeMibolerone
Iziphumo zecala ze8.Mibolerone
10.Buy iMibolerone online
Ividiyo yeMibolerone powder
I.Mibolerone powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: Mibolerone powder
I-molecular Formula: C20H30O2
Isisindo somzimba: 302.45
umbala: I-White okanye Off Off powder
1. Yintoni i-Mibolerone (Hlola amaconsi)?
IMibolerone(jonga amaconsi, I-Cas No. 3704-9-4) eyaziwa ngokuba yi-dimethylnortestosterone (DMNT), yaqala ukuhlanganiswa kwi-1963. I-Mibolerone yayithengiswa ngu-Upjohn ngegama lomnxeba Hlola i-Drops kunye neMatenon, ukuze isetyenziswe njengesigqirha sezilwanyana.Iye yaboniswa ngokukodwa njengonyango lomlomo wokuthintela i-estrus (ubushushu) kwizinja ezindala zezinja (imbolerone inja).
I-Mibolerone ibakala lezilwanyana anabolic steroid ekhutshwe kwi-1960 ngu-Upjohn phantsi kwegama lomtshato Hlola ama-Drops kwaye kamva njenge-Check Medicated Dog Dog (imbolerone inja). Injongo yale steroid kukuphazamisa umjikelezo wesini senja yowesifazane (imbolerone inja) ukuze ukhusele ukukhulelwa. Njengama-hormone amaninzi e-anabolic steroid, kwaye oku kubandakanya ibanga lesigqirha, kungekudala emva kokuqala kwayo ukuba abagijimi kunye nabakhi bomzimba bafumana ukusetyenziswa (ukwakha umzimba ngamabolerone).
I-Mibolerone Chemical Description
igama IMibolerone, iDMNT
Igama lebrand Hlola i-Drops, i-Matenon, Hlola Ukutya kweenja ezixutywayo
I-Molecular Formula C20H30O2
Isisindo somzimba 302.45
umbala I-White okanye Off Off powder
Ngokusetyenziswa kwe-body bullon usebolerone, i-mibolerone (Hlola amaconsi) yenye ye-steroids enamandla kakhulu eyenziwe. Kwakhona enye yezona zinto ezinzima kakhulu eziye zenziwa ngokwemiphumo emibi. Oku akusiyo i-steroid esetyenziswa rhoqo ngama-bodybuilders okanye abadlali. Ngokuqhelekileyo uzakufumana ukusetyenziswa kwayo okulinganiselwe ukulwa ngaphambili okanye ukuncintisana kwamandla. Abanye abakhi bomzimba baya kuwusebenzisa phambi kokuncintisana ukuncedisa kwiiveki zokugqibela okanye kwixesha elide lokunyusa, kodwa akuyona into eqhelekileyo yokwakha umzimba. Siza kwenza ngakumbi malunga nale mibolerone enamandla kakhulu ye-steroid (Hlola amaconsi) aqhubeke.
2. I-Mibolerone edibanisa i-Pharmacy
Uphi uMibolerone? Indlela yokwenza i-Mibolerone (Hlola i-Drops)?
Njengoko kuthethwe ngaphambili, i-Mibolerone yi-anabolic ye-vet-grade eyayiqala ukudala kwi-1960 yinkampani ebizwa nge-Upjohn. Ngethuba lexesha, lalinalo igama lokuqala Hlola amanqatha, kodwa emva koko, yaguqulwa yaba yinto eyahlukileyo: Hlola Ukutya Kweenja ezixutywayo (imbolerone inja). Isizathu sokuqala esi steroid saqulunqwa kukukhusela izinja zezilwanyana ukuba zingakhulelwe. Yasebenza ngokukhethekileyo ukuyeka umjikelezo wesisini sezinja zeentombi, kwaye yayiye kwaye ihlala ingokoqobo, imveliso eyenzelwe ngenjongo yokunceda ii-canines. Nangona kunjalo, njengamachiza amaninzi ngeenjongo enye, abantu, ngokukodwa abo kwiimidlalo ze-athletics kunye nokwakha umzimba, bakufumanisa ukuba luncedo kwezinye izizathu.
Ngendlela yokwenza i-mibolerone (Hlola i-Drops), i-mibolerone inxulumene nelinye i-steroids eyaziwayo e-Nandrolone. I-Mibolerone ngumlomo we-anabolic androgen, kwaye itholakala kwenye i-steroid ethandwa, iNandrolone. Oku kunene utshintshile ukusuka kuyo Nandrolone. Hlola amaconsi adalwa ngokufaka nje ngeqela elongezelelweyo le-methyl kwi-7th kunye ne-17th isikhundla se-Nandrolone hormone. Leli qela elongeziweyo kwi-7th isikhundla lenza ukuba lube namandla kakhulu ngokwemiphumo yalo kunye ne-androgenic, kwaye luvimbela i-5-alpha yokunciphisa i-enzyme ekusebenzeni. Iqela elongezelelweyo kwisikhundla se-17th likhusela i-hormone ukuba lonakaliswe ngexesha lokungena ngomlomo. Ngoko ngokobugcisa, kuthathwa njenge-C17-alpha alkylated steroid.
Ngolu tshintsho oluncinane, utshintshi oluncinane, lwenza i-hormone yeNandrolone ibe namandla kakhulu kwaye inamandla kakhulu. Kungaba yinto enye enamandla kakhulu ye-steroid androgens eyadalwa, kakhulu kangangokuthi u-Upjohn uthi ngokuqinisekileyo ukujonga i-Drops ixinzelele ngokuphindaphindiweyo kathathu kune-testosterone kwaye phantse kathathu njengento enamandla ye-androgenic. Ukusebenza, kubonakala kunamandla kakhulu kulezo ntlonipho.
3. Ukusetyenziswa komzimba weMibolerone
I-Mibolerone isetyenziswe ngabakhi bomzimba, abaxhasi bamandla, abadlali bamandla kunye nabaqhawe, konke ngenjongo yokwandisa ulwaphulo kunye nokusebenza ngosuku lokhuphiswano. I-Mibolerone (Hlola amaconsi) asebenzayo xa usebenzisa ii-30 imizuzu ngaphambi kokuncintisana. Umsebenzisi uya kuba nolwaphulo olwandisiweyo, ugxininiso kunye nomqhubi wokukhuphisana. Nangona le steroid ayiquki nayiphi na ivuselela ngokuthe ngqo, ibonisa isenzo esibonakalayo kwi-CNS (iNkqubo yeNervous Central) ngohlobo lwe-androgen olungaphezu kwe-overload. Le yeso sizathu kuphela esi sigqirha sisetyenziswe ngabadlali, njengoko iimali ze-muscle zingabonakaliyo nale nkunkuma.
I-Mibolerone yi-anabolic steroid yomlomo, eyakhiwe yi-nandrolone. Eli arhente ngokukhethekileyo i-nandrolone ye-7,17-dimethylated, enamandla kakhulu njenge-anabolic kunye ne-androgenic e-arhente kunomzali ongekho-methylated. Kule minyaka, i-mibolerone iye yafumana udumo phakathi kwabakhi bomzimba njengenye ye-steorid enamandla kakhulu eyenziwe. Oku kuchanekileyo kumqondo wezobugcisa, njengenye yezinto ezimbalwa ezikhethiweyo zemveliso ze-steroid ezisebenzayo kwi-microgram, kungekhona i-milligram, ixabiso. Ngexesha lokulinganisa izilwanyana eziqhelekileyo, i-mibolerone yazimisela ukuba namaxesha e-41 umsebenzi we-anabolic we-methyltestosterone xa unikezwa ngomlomo. Ngokwahlukileyo, kwakunexesha le-18 kuphela umsebenzi we androgenic. Nangona zombini iipropati zivakaliswa ngokugqithiseleyo nge-arhente, igcina isalathisi esino-anabolic ngokuyinqobo (ngendlela engqinelanayo). I-Estrogenic kunye neprogesational properties nazo zichazwe kakhulu nale nkunkuma, nangona kunjalo. Phakathi kwabadlali abaqhelekileyo basetyenziswa ngexesha lokuqhawula ukuqeqeshwa, okanye ukuvuselela ubundlobongela ngaphambi kokuqhuba umsebenzi okanye ukhuphiswano.
I-Mibolerone ayikho i-steroid esetyenziswa rhoqo ngama-bodybuilders okanye abadlali.
4. I-Mibolerone (Hlola i-Drops) iziphumo
Ngaphandle kokungathandabuzeki, izizathu eziphambili zokuthi iMibolerone (Hlola i-Drops) yinto eyaziwayo yiyobisi ngenxa yeempembelelo zayo ezinamandla kunye ne-androgenic, ngamanye amazwi, amandla ayo okuphucula nokuqinisa ubugwenxa. Yingakho kukukhethwa ngabantu abaqhankqalayo, abadlali bezemidlalo, kunye nabadlali beemidlalo. Kulawo asetyenziswa kumazinga aphezulu okukhuphiswano, kuyacaca ukuba yintoni enokuyenza ngokweziphumo zayo; oku kwenza ukuba luncedo kwaye luncedo. Ngokuchasene nenkolelo eninzi, ininzi ye-anabolic steroids ayinyusa ukwanda. Ngokuqinisekileyo, banokunyusa ugxininiso nokuphucula amanqanaba e-testosterone ekhokelela ekugxininiseni ngakumbi kunye nokukhuthazwa, kodwa ngokukhawuleza, ulwaphulo olunomsindo, ambalwa amachiza anesiphumo sokuthi uMiberlorone unayo. Ukunyanzelisa akukho nto into embi, nokuba kunjalo. Ukuba unomntu onoxanduva, unoxanduva lomntu, unokusebenzisa ubugwenxa xa usebenzisa ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, ukuba umntu unesimo sengqondo esibi, kuya kuba sisigqibo esingenangqondo sokubanika okanye ukuvumela ukuba basebenzise i-Mibolerone (Hlola i-Drops).
Isizathu esona sizathu sokuba ubani angasebenzisa olu hlobo lwesilwanyana, kwakhona, ngenjongo yokwandisa ukugxilwa kwengqondo kunye nobudlova obangela ukulwa okanye olunye uhlobo olutshanje, uluhlu lokufuna ukunyuka kwengqondo. Abadlali abaqhelekileyo ukuba bathathe isilwanyana esibangela ukulwa nobudlova kwimeko yokuzivocavoca, kodwa abaqulunqa umzimba baya kuwusebenzisa ekupheleni kokutya kokuncintisana kokutya ukuze bafikelele kwiiveki zokugqibela kwiimbono zokuqonda. Ngaphakathi abanxibe impahla, ukulungelelanisa kunzima kakhulu, kwaye kwiiiveki zokugqibela apho amaxesha athoba nzima, kukho imfuneko yokuba loo nto igxininise ingqondo, kunye ne-Mibolerone (Hlola i-Drops) inako ukwenza oko. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusetyenziswa okuqhubekayo kunokukhokelela ekunokubanjiswa kwamanye amazwe, nangona kunjalo, ukugcinwa kwamanzi kungenzeka. Oko kwathiwa, yinto enokulawulwa kwaye ayinkulu kakhulu kwintsebenziswano xa kuthelekiswa nezinye iinkalo ezibangela ukuba kunzima kakhulu.
Ngokwemfundiso, i-Mibolerone (Hlola i-Drops) yilisikizo esiza kuba nezakhiwo ezithile ze-anabolic ezinamandla, kodwa ngenxa yokuba kuyingozi kangakanani kwimpilo yakho, kubangela ukuba akukho nto ingayisebenzisi le nkunkuma ngokukodwa kule njongo. Oko kwathiwa, umntu ulunge ngakumbi ekuthatheliseni nje ngenjongo yobundlobongela, kwaye kwakhona, oko kukuphela kwesizathu sokuyithatha sinikwe ingozi kwiindlela ezininzi.
I-Mibolerone (Hlola i-Drops) inobomi bemizuzu yeeyure ze-4 (i-mibolerone yobomi bemizuzu), eyona mfutshane (ixesha elilandelayo apho izidakamizwa kunye nemiphumo yalo ziphuma emzimbeni womsebenzisi). Yingakho abagijimi bayacetyiswa ukuba basebenzise nje imizuzu ye-20 ukuya kwii-30 imizuzu ngaphambi kokuba bafune ukukhuliswa.
6. Umjikelezo weMibolerone
Akukho bukho ubungqina boqobo okanye i-athlete abasebenzisa Hlola amaconsi "umjikelezo" (umjikelezo wemibolerone) njengento eqhelekileyo kwezinye i-steroids. Kubonakala sengathi le steroid iqhube ibango eliqinileyo njenge-stroid yangaphambili yesiganeko sokwenza ukwanda komqhubi kunye nomqhubi wokhuphiswano. Nangona kunjalo, akukho ziphumo ezininzi kwiisistim zomzimba zingaphunyezwa kule nkunkuma ngenxa yeyona nto ingasetyenziselwa iifutshane ze2 ngeveki, kwiimfuno ezincinane zamabolerone. Naliphi na ixesha elingakumbi kulo, okanye idosi enzima, kunye nokukhathazeka kwezempilo kusondele.
I-Mibolerone isetyenziswe ngokumalunga nemizuzu ye-30 phambi kokhuphiswano, kuba isilwanyana sibonisa ubomi obufutshane bombolerone. Indlela yokuthabatha eli liyeza lugxininiso oluthile, olubeka ithebhulethi yeMibolerone phantsi kolwimi. Le ndlela yokusebenzisa ivumela ukuba uhlaselo olukhawulezayo kunye namandla anyuke. Isenzo sale nkunkuma siphela malunga neeyure ze-4, ngoko isisusa sisuswa emzimbeni womntu.
Umlinganiselo we-mibolerone oqhelekileyo ngowama-5 mgs yeMibolerone ekufuneka ithathe imizuzu ye-30 ngaphambi komzuzu obalulekileyo woqeqesho okanye ukhuphiswano. Ngokuqhelekileyo, eli chiza lithathwa lodwa, akukho mjikelezo we-mibolerone, ngaphandle kokugxinwa namanye amanyathelo.
Ngokuqhelekileyo, ngokungafani nezinye ezininzi iziyobisi ze-anabolic, IMibolerone (Hlola amaconsi) ayisebenzisi ngexesha lomjikelezo. Le yodwa yeso steroid esandulela isiganeko esenza ukuba ugonyamelo kunye nokukhuphisana luqhube luqina. Ikhosi emfutshane yokulawula kunye neepalolerone dosages ezincinane zenza i-Mibolerone ye-muscle ifumana ubunzima obungenangqondo. Ngakolunye uhlangothi, ukuthatha ixesha elide okanye kumadolerone aphezulu amayeza angakhuthaza iingxaki zempilo. Njengoko iMibolerone yobomi bemizuzu imfutshane kakhulu, isiza kufuneka sithathwe imizuzu ye-30 ngaphambi kokuncintisana.
Ukuba ufuna ngokwenene ukuthatha eli liyeza, unokuthenga imbolerone kwi-intanethi kwiwebsite yethu www.aasraw.com, kodwa ungalibali ukuthatha i-hepatoprotectors ukunciphisa isenzo esiyingozi soMibolerone.
8. Iimiphumo zeMibolerone
Iimiphumo zeMibolerone zininzi. Le yenye ye-steroid enamandla kunazo zonke kunye ne-anabolic steroids eyingozi kakhulu eyenziwe. Ngenxa yokuba imiphumo ye-mibolerone yomelele kakhulu akuyena umntu omele asebenzise. Kukho iindlela ezininzi ezingcono. Ukwanda kobudlova kusithi ngaphambi kokuba ulwala lunokuba lunzima, kodwa iingozi ziza kubangela umvuzo ngale steroid. Oku akuthethi ukuba umntu uya kufa, kwaye kunokwenzeka ukuba iziphumo zamacolerone ziya kugwenywa kwizinga (azinakuphephelwa ngokupheleleyo). Iziphumo ezichaphazelekayo zeMibolerone zingaquka:
I-Mibolerone inqunywe ngumzimba, kwaye ithathwa njenge-estrogenic steroid kakhulu ngenxa yokuguqulwa kwayo kwi-7,17-dimethylestradiol (i-estrogen enezinto eziphezulu zezinto eziphilayo). I-Gynecomastia inokuba yinkxalabo ngexesha lotyando, ingakumbi xa isetyenziswe ngaphezu kweendlela eziqhelekileyo zonyango. Ngexesha elifanayo ukugcinwa kwamanzi kungaba yingxaki, kubangele ukulahleka okuphawulekayo kwemisipha njengento yokugcinwa kwamanzi kunye namanqanaba atywalayo. Ukuze ugweme imiphumo emibi ye-estrogenic, kunokufuneka ukuba usebenzise i-anti-estrogen efana ne-Nolvadex®. Omnye unokusebenzisa enye i-aromatase inhibitor njenge-Arimidex® (i-anastrozole), eyona ndlela isisombululo esiphezulu sokulawula i-estrogen. Noko ke, i-Aromatase inhibitors, ingaba yindleko xa kuthelekiswa neendlela ezisetyenziswayo zokulondolozwa kwe-estrogen, kwaye ingaba nemiphumo emibi kwigazi lipids.
Kuyabona ukuba i-mibolerone nayo ibonisa umsebenzi oqinileyo njengeprogesin emzimbeni. Iziphumo ezichaphazelekayo ezinxulumene neprogesterone zifana nezo-estrogen, kubandakanya ukuphazamiseka kwempendulo yokuvelisa i-testosterone kunye nenani elongezelelweyo lokugcina amafutha. Iiprogestins nazo zandisa imiphumo yokuvuselela i-estrogens ekukhuleni kwamathumbu omzimba. Kubonakala ngathi kukho ukusebenzisana okunamandla phakathi kwezi hormone ezimbini apha, ezinokuba i-gynecomastia inokuthi yenzeke ngoncedo lwama-progesin ngaphandle kwamanqanaba e-estrojeni amaninzi. Ukusetyenziswa kwe-anti-estrogen, evimbela inxalenye ye-estrogenic yale ngxaki, iyanelisekile ukunciphisa i-gynecomastia ebangelwa yimibolerone.
Iziphumo zecala ze-androgenic ze-mibolerone zingaquka i-acne, ukukhula kweenwele zomzimba kunye nokulahleka kweenwele kumadoda afakwe kwi-baldness yamadoda. Iziphumo zecala ze-androgenic zemibolerone nazo zingaquka iimpawu zokuhluthwa kwabafazi; Enyanisweni, ukuhlaziywa kwinqanaba elithile liqinisekisiwe.
Kuba umsebenzisi we-genetics uza kuqinisekisa ubunzima begalelo le-androgenic. Kwakhona kubalulekile ukuqaphela ukuba i-androgenicity ye-hormone ayikwazi ukuncitshiswa ngokusebenzisa i-5-alpha reductase inhibitor njengeFfinasteride; abayi kuba nako.
Enye yezindlela ezimbi kakhulu zokuphazamisa inkqubo yakho ye-cardiovascular system ngokuthatha i-Mibolearone. Xa uwathatha, baya kwenza ama-cholesterol akho amanqanaba, ngokukodwa i-cholesterol yakho embi, aphume ephahleni. Kwakhona kuya kwenza ukuba izinto ezikhoyo ze-cardiovascular problems zibi kakhulu. Gcina zonke ezi zinto engqondweni xa usebenzisa i-Mibolearone. Kufuneka udle ukutya okuxhasa impilo enesifo senhliziyo, oko kuthetha ezininzi ze-omega zi-fatty acids, iishukela ezilula ezimbalwa kunye namafutha ambalwa amaninzi. Ngaphandle kwezinto ezifanelekileyo zokutya, umzila wokuzilolonga ophelisa i-cardio nayo ibalulekile. Ukuba ungumntu ohambelana nenkcazo ekhankanywe nje, ufanele ulunge kakuhle nge-Mibolearone.
Nangona kunjalo, ukuba unomntu onesiprofayili sentliziyo ephosakeleyo ngokwenene, le yinye isicatshulwa okungafanele ufune ukuyenza. Kwimeko apho, unokuthatha isongezelelo sokuncedisa i-antioxidant ukukhangela kabini ukujonga ukuba zonke iziseko zakho zigqitywa xa usebenzisa.
I-Mibolerone yi-c17-alpha alkylated compound. Olu tshintsho lukhusela isicatshulwa ekucimeni kwesibindi, okuvumela ipesente ephakamileyo kakhulu yokungena kweziyobisi kwigazi emva kokulawulwa komlomo. I-C17-alpha alkylated alboxylic / androgenic steroids ingaba yi-hepatotoxic. Ukutyhila ixesha elide okanye eliphezulu kunokubangela ukulimala kwesibindi. Kwiimeko ezinqabileyo iintsholongwane ezisongela ubomi zingaphuhlisa. Kucetyiswa ukutyelela ugqirha ngezikhathi ezithile kumjikelezo ngamnye ukujonga umsebenzi weesibindi kunye nempilo yonke. Ukufakwa kwe-c17-alpha alkylated steroids ixhaphake kwii-6-8 iiveki, ngenzame yokuphepha ukunyuka kwesibindi. Iingxaki ezinobindi zesifo ezinqabileyo zinikezelwa ngendalo apho abantu abaninzi basebenzisa i-anabolic oral / androgenic steroids, nangona bengenakukhutshwa ngaphandle kwesi steroid, ngokukodwa ngamanani aphakamileyo kunye / okanye ixesha elide lokulawula. Qaphela ukuba i-US imisela ulwazi lwe-mibolerone lithetha kuphela isifundo somntu esisodwa esenziwa kwi-mibolerone, kwaye ukuba isifundo sagqitywa kwangethuba ngenxa ye-hepatotoxicity ephezulu.
Ukusetyenziswa kwesongezelelo se-footic detective ezifana ne-Liver Stabil, i-Liv-52, okanye i-Essentiale Forte isiluleko xa sithatha nayiphi na i-hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Imiphumo ye-Mibolerone-Testosterone Inhibition:
I-Mibolerone igxotha kakhulu imveliso ye-testosterone yemvelo.
-Ukulala ukulala okanye ukulala
-Qinisekisa ngokunyakaza kwamathumbu
-Abamhlophe bamehlo baqala ukutshintshana
Ukuqhelaniswa komjikelezo wesini kubafazi
-Imfihlo yesigxina kunye nokwandiswa kwekliniki kwabasetyhini
Ukukhutshwa kwelizwi kwabasetyhini
-Iyandisa ingozi ye-myocardial infarction
-Iyabangela kakubi i-triglycerides
-Nciphisa kakhulu ukuphumula kokuphela
9. Ukuhlolwa kweMibolerone
Hlola amaconsi, igama lekhemikerone, i-CAS No. 3704-9-4, yaveliswa okokuqala njengesixhobo ekugcineni izinja zeentombi zingena ekushiseni. I-technically icingwa kwaye i-androgen, nangona kunjalo, i-mibolerone iphinda ibe yindoda ephakamileyo yeyona ndlela yindlela yokusebenza ngayo kwizinja zamantombazana. Enyanisweni, i-mibolerone inokuphindwa kabini ukuxhamla kwe-progesterone receptor njengeprogesterone ngokwayo. Esi sidakamizwa saziwa ngokuba yi-steroid enamandla kakhulu ekufumaneni ubukhulu kunye nokwandisa ukwanda kobudlova. Le nkunkuma yi-19 ephuma kwi-bolasterone kwaye njengokuba i-nandrolone inamandla kakhulu kwaye ininzi kakhulu kune-testosterone, kunjalo kunjalo ne-mibolerone ithelekiswa ne-bolasterone. Ukongezwa kweqela le-methyl kwi-C-7 kungekhona nje kwandisa umsebenzi we-AR kunye ne-PR kodwa kwandisa ukonakaliswa kwe-molecule. I-Mibolerone ivela kwi-nortestosterone (nandrolone); Nangona kunjalo, ayikho into eyenziwe nge-dihydronandrolone metabolite encinci ngenxa yefuthe lokukhusela i-7-alpha methyl iqela.
I-Mibolerone icingisisa njenge-steroid enamandla kunazo zonke ezivelisa iziphumo ezifunwayo ngexesha elifutshane kakhulu. Nangona kunjalo, oku kuphela kuphela ukuba i-steroid ilawulwa kumlinganiselo wezilingo ezifanelekileyo, ngexesha elide, nangendlela efanelekileyo.
Oku kungenxa yokuba iipolisi ze-mibolerone zenzelwe emva kwamava aluncedo kunye nophando olunzulu lwesayensi. Konke kuzo zonke, imveliso yinyani kwaye iyasebenza, kodwa kufuneka isetyenziswe ngokuqapha okukhulu.
10. Thenga iMibolerone online
AASraw iyimveliso edumile ebonelela ngeentlobo ezininzi ze-steroids i-powder ekhompyutheni ekhompyutheni, ihlinzeke ngamabolerone ekuthengiseni i-intanethi, ngenxa yokuba u-Upjohn wayeke ukuvelisa i-drops minyaka emininzi edlulileyo, ngoko ke iibhotile ezininzi (ukuba kukho nantoni na) zikhona zento yokuqala eyenziwe ngu-Upjohn. Nangona i-legit Hlola i-Drops iyanzima ukuza, kukho iinguqu ezingaphantsi komhlaba eziyimveliso ye-mibolerone enokuthi ilawulwe kumakethi angaphantsi komhlaba. Ixabiso lingahluka, kodwa, ekugqibeleni, mg ngomg le steroid ebiza kakhulu xa kuthelekiswa nabanye njengoDaa Durabolin no-Dianabol. Ibhuleji elingaphantsi komhlaba lithengela i-mibolerone eluhlaza ekuthengiseni i-intanethi ukwenza iimveliso ezigqityiweyo.
tags: athenge iMibolerone powder, Mibolerone powder
U-Tykerb (231277-92-2) -Umbulali webele	MAGL inhibitor JJKK-048 abathengi kwi-intanethi